Phatha iMacbook okanye iMacbook Pro yakho ngale ngxowa mfutshane | Ndisuka mac
I-Apple ibizama iminyaka ukufumana elona khaphukhaphu lilula nelicekeceke. Abo basebenzisa iMac yethu kwindlela yokusebenza okanye ukuhamba rhoqo bayakuqonda oku kukhanya kunye ne-ergonomics. Khetha kule meko ibhegi okanye ibrifkheyisi yothutho, ngaphandle kokuba ngumsebenzi onzima, ukuba ufuna ukunikezela ixesha elithile. Ewe, uyilo oluncinci lweekhompyuter ze-Apple ludinga ukuhambisa ngokukhuselekileyo, kodwa kwangaxeshanye lihle. Namhlanje siyayazi ibrifkheyisi ehlangabezana nezi mpawu zimbini zazivelisiwe ngaphambili, ngelo xesha ngexabiso elifikelelekayo kubo bonke abasebenzisi beMac.
Ngaphandle, le ngxowa-mali inesiphelo esifana nelaphu, kwelinye icala, ukuyichukumisa lilaphu elimnandi njengelaphu, kodwa nge ipholiyesta texture, ilungele Umxholo ongangeni manzi, njengoko kuchaziwe ngezantsi. Kule mibala ilandelayo: ngwevu okhanyayo, kunye ne-zip yeorenji kunye nesiphatho, okanye i-mint eluhlaza kunye ne-zip emnyama kunye nesiphatho nge-orange handle. Sinepokotho yangaphandle, efanelekileyo yokugcina itshaja, iselfowuni okanye ezinye izinto ezincinci.
Enye inqaku elibalulekileyo yile Ijacket engenamanzi ezisa ibrifkheyisi ye-Inateck. Ibandakanya ukukhuselwa okungama-600D, ukunganyangekiyo kukutshiza kwamanzi kwaye abayili baqinisekisa ukuba inokuhlala iminyaka.
Olunye uncedo lwebhegi, ukususwa kweMac ngeli xesha, Uyilo luvumela izixhobo ukuba zisuswe ecaleni, eyenza kube nzima ngakumbi ukuba omnye umxholo wabelane ngendawo neMac, inokususwa ngokulula.
Okokugqibela, elona candelo libalulekileyo ngokoluvo lwam, ukukhuselwa ekubethweni okungenanjongo. Ine-padding yangaphakathi e-5 evumela ukhuseleko olukhulu.
Ibhegi emfutshane ifumaneka ngokobukhulu bulandelayo: I-13 ukuya kwi-13.3 intshi, ii-intshi ezili-14 kunye ne-15 ukuya kwi-15.4. Singayithenga ibrifkheyisi e Amazonkunye amaxabiso aphakathi kwe- € 13,99 ukuya kwi- € 19,99 € kuxhomekeke kubungakanani obukhethiweyo. Ngexesha lokubhala inqaku, emazantsi, sinokufumana isaphulelo se-30% ngokufaka ikhowudi ebonakala apho.
Ke ngoko, ukuba ufuna ukunika imeko yakho yezothutho utshintsho lwendawo okanye ukhusele izixhobo zakho, eli lithuba elihle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Phatha iMacbook okanye iMacbook Pro yakho ngale ngxowa mfutshane